China Beach imoto ithambeka yoMvelisi kunye noMthengisi | URuiyi
Uhambo lwemoto elunxwemeni
Itekhnoloji edibeneyo yokudibanisa ivumela umsebenzisi ukuba asonge kuqala kwaye ajikeleze ithambeka kubungakanani obaneleyo bokupakisha kwisithuba esincinci.
Ukuqhagamshela kabini ukupakisha: Itekhnoloji edibeneyo yokudibanisa ivumela umsebenzisi ukuba asonge kuqala kwaye ajikeleze ithambeka kubungakanani obaneleyo bokupakisha kwisithuba esincinci, njengaphantsi kwe-ATV okanye ngasemva kwesihlalo selori. Ezi rampu zisombulula ingxaki yokugcina kwaye zilungele izithuba ezingenakufezekiswa ngeerampu eziqhelekileyo.
Unxibelelwano oluphindwe kabini ekupakisheni: Itekhnoloji edityanisiweyo ephindwe kabini ivumela umsebenzisi ukuba asonge kuqala emva koko ajikeleze ithambeka kubungakanani obaneleyo bokupakisha kwisithuba esincinci, njengaphantsi kwe-ATV okanye ngasemva kwesihlalo selori. Ezi rampu zisombulula ingxaki yokugcina kwaye zilungele izithuba ezingenakufezekiswa ngeerampu eziqhelekileyo.
Ukulungiswa kwendlela: Ukusika ibambelele kunika umsebenzi wokulayisha olula, uqinisekisa ukuba inkqubo yokulayisha nokukothula ayigxininiswanga, kwaye izinto zakho zikhuselekile kwaye zithembekile kwithambeka.
Self-uvala ubunzulu: Kufuneka utyhile kuphela ithambeka elidibeneyo elihlangeneyo, iArch inokutshixa ngokuzenzekelayo endaweni yayo kwaye ilayishe.
I-aluminium elula: iiponti ezingama-22 kuphela. Ithambeka ngalinye (i-44 lbs). Ngezibini), ezi thambeka zenziwe nge-aluminium yokuhamba ngenqanaba, ukubonelela ngamandla kunye nokuqina ngaphandle kokongeza ubunzima.
Uyilo lokonga indawo:Uyilo oluhlangeneyo kathathu lusindisa indawo kwaye lwenza ukugcinwa kungapheli. Inokufakwa kwibhokisi yezixhobo yeloli esemgangathweni, kubandakanya isiphatho ukuze kube lula ukuphatha.
Ukulayisha ngokukhuselekileyo: Amabhanti ezihlalo ahlengahlengisiweyo afakelweyo aqinisekisa ukulayishwa okukhuselekileyo kunye nokothula amava kunye nokuqinisekisa ukuba izixhobo zakho zilayishwe ngokukhuselekileyo kwilori.
Inani leModareyitha CW060
Umthamo 3000LBS / 1500KG
Igama lebrand JF
Izibuko lokulayisha Qingdao Port
GW I-78KG / I-PAIR
Ubungakanani 4000 * 500 * 106mm
NW I-76KG / I-PAIR
Iphakheji Abathengi abaFunekayo
Igama lemveliso IAluminiyam Ramp
Okanye qhagamshelana nathi
Egqithileyo Umgangatho ophezulu wokulayisha ulungiso lweemoto
Okulandelayo: Isixhobo segadi
Umxube weKhonkrithi yase China, Ivili likaCaster, DB Ivili, Eziphathekayo Umxhubi Iinkuphelostencils, Isondo le-China PU, I-China i-PU Foam Isondo,